နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ထံ လုပ်ငန်းရှင်များ တင်ပြချက် ၁ဝ ရက်ကြာသည်အထိ တစ်စုံတစ်ရ?? - Yangon Media Group
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ထံ လုပ်ငန်းရှင်များ တင်ပြချက် ၁ဝ ရက်ကြာသည်အထိ တစ်စုံတစ်ရ??
မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်း
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံနှင့် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပြီး ၁ဝ ရက် အကြာသည်အထိ တင်ပြခဲ့မှုများနှင့်ပတ်သက်၍ ထူးခြားမှုတစ်စုံ တစ်ရာမရှိသေးကြောင်း သိရသည်။
”အခုထိတော့ ဘာမှထူးခြား မှုမရှိသေးပါဘူး။ လုပ်ပေးမယ်လို့ ပြောသွားတဲ့ကိစ္စဖြစ်လို့ သက်ဆိုင်ရာဌာနဆိုင်ရာတွေနဲ့ ဆွေးနွေးပြီးရင် တတ်နိုင်သလောက် အမြန်ဆုံးအကောင်အထည်ဖော်ပေးမယ်လို့ ယုံကြည်ပါတယ်” ဟု မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းက ဒီမိုကရေစီတူဒေးသို့ စက်တင်ဘာ ၆ ရက်တွင် ပြောသည်။ ၎င်းတို့တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့မှုများကို လုပ်ဆောင်ပေးရန်မှာ နိုင်ငံ၏ မူဝါဒများအဖြစ် ချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်ရမည်ဖြစ်သဖြင့် ထိုက်သင့်သော အချိန်ရောက်လျှင် လုပ်ဆောင်ပေးလာမည်ဟု ယူဆကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များကလည်း ထိုအချိန်ကို စောင့်ဆိုင်းနေကြ ကြောင်း ၎င်းကပြောသည်။
UMFCCI ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ မောင်မောင်လေးက နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံဆွေး နွေးစဉ် တင်ပြအကြံပြုချက်များနှင့်ပတ်သက်၍ သက်ဆိုင်ရာဌာန ဆိုင်ရာများမှ အကြောင်းပြန်ကြားလာခြင်းမရှိသေးကြောင်း၊ UMFCCI အနေဖြင့် ယခင်တင်ပြတောင်းဆိုခဲ့သည့် အချက်အလက် အကြံ ပြုချက်များထက် ပြီးပြည့်စုံသောသုံးချက်အကြံပြုချက် အစီအရင်ခံစာတစ်ခုကိုပြုစု၍ ထပ်မံတင်ပြရန်စီ စဉ်နေကြောင်း ပြောသည်။ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန အမြဲတမ်းအတွင်းဝန် ဦးထွန်းထွန်းနိုင်က နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များတွေ့ဆုံပွဲမှ တင်ပြအကြံပြုချက်များကို အစိုးရက မည်သို့ဆောင်ရွက်နေသည်နှင့်ပတ်သက်၍ ၎င်းအနေဖြင့် မသိရှိသေးကြောင်း ပြောသည်။
”ကျွန်တော်လည်း မသိသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ ဆောင်ရွက်တာမရှိဘူးလို့ ကျွန်တော်ပြောချင်တာ မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ ဘာမှမသိသေးတာပါ။ အခွန်လျှော့ဖို့က ပြည်တွင်းအခွန်ဘက်ကိုမေးပါ။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ အခွန်ကတော့ ကိုယ့်သဘောနဲ့ ကိုယ်လုပ်လို့ မရဘူး။ သူတို့ဘာ သူတို့ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ထားလဲ။ ဘယ်လိုတင်ပြထားလဲ။ ကျွန်တော့်ဆီတော့ မရောက်ဘူး။ ဝန်ကြီးဆီတိုက်ရိုက်တင်ပြသလားဆိုတာ ကျွန်တော်မသိဘူး”ဟု ၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်နှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ တွေ့ဆုံပွဲကို သြဂုတ် ၂၇ ရက်ကပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီး UMFCCI ဥက္ကဋ္ဌ ဦးဇော်မင်းဝင်း၊ MBCCD နှင့် စေပိုင်ကုမ္ပဏီဥက္ကဋ္ဌ ဦးမောင်ဝိတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌ ဦးရှိန်ဝင်းတို့က နိုင်ငံခြားငွေလဲလှယ်နှုန်းတည်ငြိမ်ရေး၊ ပို့ကုန်သွင်းကုန်ကိစ္စရပ်များတွင် မူဝါဒတည်ငြိမ် ရေး၊ ဆောက်လုပ်ရေးကဏ္ဍတွင် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများအတွက် ဘဏ်ချေးငွေအတိုးနှုန်းနှင့် အခွန်နှုန်းထားများလျှော့ချပေးရေး၊ ကွန်ဒိုမီနီယံအဆောက်အအုံများနှင့် ပတ်သက်၍ ဝယ်ယူသူများအတွက် အခွန်နှုန်းထားများဖြေလျှော့ပေးနိုင်ရေးတို့ကို တင်ပြအကြံပြုခဲ့ပြီး နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်က အတတ်နိုင်ဆုံး လျှော့ပေါ့ပေးနိုင်ရန် သက်ဆိုင်ရာဌာနများနှင့် ညှိနှိုင်း ဆောင်ရွက်ပေးသွားမည်ဖြစ် ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
ယင်းအပြင်ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးများနှင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲကိုလည်း ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ယင်းစကားဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် စီးပွားလုပ်ငန်းရှင်များက ဘဏ်အတိုးနှုန်းလျှော့ချရေး၊ ငွေကြေးဖောင်းပွမှုနှုန်း ထိန်းချုပ်ရေး၊ ငွေကြေးလည်ပတ်မှု မှန်ကန်စေရေး၊ ပြည်ပပို့ကုန်မြင့်မားရေး၊ သွင်းကုန်အစားထိုးရေးစသည်တို့ကို ဆွေးနွေးအကြံပြုခဲ့ပြီး ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသောင်းထွန်းက ယခုဆွေးနွေးပွဲသည် ပထမဆုံးအကြိမ် ဆွေးနွေးပွဲဖြစ်သည့်အတွက် မိမိတို့အနေဖြင့် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များ၏ စကားသံကိုနားထောင်ရန်အသင့်ရှိပါကြောင်း၊ နိုင်ငံတော်အစိုးရနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်များအနေဖြင့် တိုင်းပြည်စီးပွားရေးကို တိုးတက်စေလိုသည့် ဆန္ဒရှိမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ဆန္ဒရှိရုံသာမကဆန္ဒ၊ အသိပညာနှင့် ကျွမ်းကျင်မှုရှိရမည်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ အစိုးရအနေဖြင့်လည်း Myanmar Sustainable Development Planကို ရေးဆွဲပြီး ဖြစ်ပါကြောင်း၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း ရှင်များ၏ လိုအပ်ချက်များကိုသိရှိလိုကြောင်း၊ နောင်အကြိမ်များတွင် အဖြေရအောင် ကြိုးစားဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြားခဲ့သည်။
လူဦးရေ များပြားလာမှု၊ မြို့ ပြဖွံ့ ဖြိုးလာမှု၊ စိုက်ပျိုးရေး လုပ်ငန်းများ တိုးချဲ့လာမှုနှင်??
Pee Mak မင်းသမီး Mai Davika မြန်မာနိုင်ငံသို့ တတိယအကြိမ် လာရောက်၊ BRAND’S ကုန်အမှတ်တံဆိပ် သံတမန်အဖြစ် ခန့်??